Ahoana ny fomba hanakanana ny mpangalatra tsy hangalatra ny atiny
Alakamisy, Jolay 8, 2010 Zoma, Jona 15, 2018 Douglas Karr
Tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity, ny sasany aminareo dia nahatsikaritra fa nanenjika bilaogera mangalatra atiny aho Martech Zone. Indraindray dia mitranga izany rehefa mientanentana ny olona iray ary manapa-kevitra fa manome tombony ahy izy ireo amin'ny fanitarana ny mpihaino ahy. Tsy izany no izy. Ity vazivazy ity dia namoaka ny lahatsoratra tao amin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo miaraka amin'ny anarany manokana ho mpanoratra. Tsy ekena.
Ity lehilahy ity dia nandefa ilay lahatsoratra halatra tao amin'ny bilaoginy bilaogera. Tsy dia marani-tsaina izany, satria manaraka ny naoty fakana vola Digital Millenium Copyright Act (DMCA) ny Blogger. Nofenoiko ny endrika nosoratan'ny Blogger ary nahazo fampandrenesana androany aho fa nesorin'izy ireo ny atiny halatra.
Tena ankasitrahako ny fanohanan'ny Blogger an'io!
Ahoana no fomba hiomanana amin'ny halatra ny atiny
Zava-dehibe ny manamarika fa ninia namela lalan-dàlana ho any amin'ireo lahatsoratry ny bilaogiko aho. Mahalana tokoa ireo mpangalatra ireo no manoratra na mandika ny atiny ary apetaho. Fa kosa, manoratra algorithme izy ireo ary mandray ny fahana RSS ary manosika azy ireo hiala amin'ny bilaoginy. Amin'ny ankamaroan'ny fotoana hitrangan'izany dia tsy fantatry ny bilaogera. Izaho dia. Iray amin'ireo antony namelabelarako ny Plugin PostPost dia mba hahafahako manitsy sy manampy atiny amin'ny tongotro. Ny lahatsoratra rehetra amin'ny fahana RSS misy ahy dia misy karazana rohy miverina amin'ny bilaogiko.
Manaraka, nametraka aho Google Alerts miaraka amin'ny fonenako ho toy ny teny fikarohana (ary koa ny sasany tsy azoko lazaina aminao). Ankehitriny - isaky ny misy mampifandray ny bilaogiko dia mahazo fampandrenesana mailaka miaraka amin'ny sombin'ilay lahatsoratra aho. Fantatra avy hatrany izany rehefa mamaky ny atiny ao amin'ny vatan'ny fanairana aho.
Angamba ny iray amin'ireo zavatra mampatahotra indrindra ataoko dia ny mividy sary avy hatrany an'i iStockPhoto ho an'ny lahatsoratro rehetra amin'ny herinandro ho avy. Koa satria mandoa ny sariko aho, ara-dalàna raha mampiasa azy aho fa tsy misy olon-kafa. Raha adala ianao mangalatra ny atiny, mety mamoaka ireo sary novidina ireo koa ianao. Ankehitriny dia manana orinasa lehibe miketrika amin'ny ady amin'ny fangalarana copyright aho. Raha vantany vao mahita ireo lahatsoratra navoaka aho dia mifandray amin'ny alalàn'ny fanohanana iStockPhoto ary tatero ny lahatsoratra tsirairay, ny sary, ny loharano ary nangalarina izy ireo.
Raha ny marina dia tsy azoko antoka raha nanenjika an'ireo tranga ireo ny iStockPhoto… samy naka ny toerany daholo izy ireo rehefa hitako izy ireo ary nilazako azy ireo. Mbola misy fahafinaretana kely meloka amin'izany ho ahy, na izany aza. Tsy te ho eo amin'ny lafiny ratsy amin'ny zon'ny mpamorona miaraka amin'ny iStockPhoto aho. Manana poketra lalina sy mpisolovava marobe izy ireo.
Lazao amin'ny namany
Tsy mangina momba izany aho. A Whois.net jereo ny mamantatra ny orinasa mpampiantrano sy ny olona tompon'ilay tranonkala. Hiezaka hifandray amin'ilay olona mivantana aho aloha. Avy eo ny mailaka dia mivoaka mankany amin'ny orinasa mpampiantrano, tezitra ireo bitsika, ary navoaka ny hafatra Facebook Wall. Tsy hijanona aho raha tsy manomboka mamaly valiny.
Araka ny nolazaiko teo aloha, tsy mbola nila nihoatra an'io teboka io aho. Misy foana ny vintana misy olona mangalatra ny atiko ary ho any am-pitan-dranomasina, miafina ary saika tsy azo enjehina. Hiezaka mafy aho hitory azy ireo amin'ny motera fikarohana amin'izay fotoana izay, saingy TSY avelako ho afa-mandositra izy ireo. Ianao koa tsy tokony!
Vahaolana Sosokevitra SaaS: Azo atolotra sy Octiv
Jul 9, 2010 amin'ny 8: 12 AM
Ity dia lahatsoratra mahafinaritra!
Saingy nanontany tena aho raha afaka manome torohevitra ahy momba ny toe-javatra sarotra nefa mitovy.
Andeha hatao hoe mandefa ny sarinao sy ny sarin'ny sarinao amin'ny tabilao tsy fantatra anarana ny olona (vakio: 4chan.org), izay malaza amin'ny tsy miraharaha na inona na inona. Ahoana no hataoko amin'ny fanesorana an'io zavatra io raha tsy fantatro akory hoe iza no mamoaka azy?
Jul 9, 2010 amin'ny 9: 20 AM
Afaka manao zavatra roa ianao:
1) Mariho ny sarinao. Asio fanamarihana eo amin'izy ireo izay milaza ny anaran'ny orinasanao na ny tranokalanao. Jereo ny tranokala toy ny iStockphoto dia ho hitanao izany.
2) Mazava ao amin'ny fitsipiky ny 4chan fa hoheverina ho henjana ny fanitsakitsahana. Hifandray amin'izy ireo aho amin'ny alàlan'ny pejin-dry zareo http://www.4chan.org/contact – raha tsy mamaly izy ireo dia alefaso amin'ny alalan'ny Twitter na any amin'ny toerana hafa azonao atao.
3) Ezaka farany farany: Azonao atao ny mitory azy ireo. Indrindra fa raha tsy vahiny ilay tranokala ary fantatra ny tompony dia araho izy ireo.
Jul 9, 2010 amin'ny 9: 29 AM
Tena ho tafiditra ao anatin'ny sokajy “Tandremo an'i Doug” izany.